Taladii Uu Roberto Firmino Ka Helay, Naxariistii Uu Jurgen Klopp Kala Kulmay Iyo Philippe Coutinho Oo Ka Hadlay Sidii Looga Caawiyay In Uu Bayern Ku Biiray. - Gool24.Net
Taladii Uu Roberto Firmino Ka Helay, Naxariistii Uu Jurgen Klopp Kala Kulmay Iyo Philippe Coutinho Oo Ka Hadlay Sidii Looga Caawiyay In Uu Bayern Ku Biiray.
Xidiga xulka qarnka Brazil iyo kooxda Bayern Munich ee Philippe Coutinho ayaa u mahad celiyay macalinkiisii hore ee Jurgen Klopp wuxuuna sheegay fariintii qoraalka ahayd ee uu ka helay taas oo ku dhiiro galisay in uu Bayern u wareegay.
Maalintii suuqa kala iibsiga Yurub ugu danbaysay ee September 2 waxa uu Philippe Coutinho heshiis amaah hal xili ciyaareed ah ugu biiray kooxda uu hadda ka tirsan yahay ee Bayern Munich waxaana door ku lahaa Jurgen Klopp.
Sidii uu dhawaan Jurgen Klopp isba xaqiijiyay, waxa uu Philippe Coutinho u sheegay in kooxda Bayern Munich ay tahay koox ay isku haboon yihiin Coutinho.
Inkasta oo aanu Philippe Coutinho wax wanaag iyo waji ah u dhigan Jurgen Klopp markii uu ka diiday in uu Liverpool la sii joogo, haddana macalinka reer Germany ayaan ku digan Coutinho wuxuuna siiyay taladii ugu fiicnayd.
Coutinho ayaa ku fashilmay waayihiisii ciyaareed ee sanadka iyo badhka uu Barcelona ugu soo qaatay wuxuuna talada Klopp uu ka helay ugu wareegay kooxda Bayern Munich oo uu doonayo in uu dib ugu soo dhiso.
Ugu horayn Coutinho oo ka hadlaya waxa uu doonayo in uu ku caawiyo kooxdiisa cusub ee Bayern Munich ayaa yidhi: “Waxaan jecelahay in aan iyaga ugu abaal gudo goolal iyo bandhig fiican oo aan garoonka ku sameeyo”.
Coutinho oo ka hadlaya naxariistii uu Klopp ka helay ayaa yidhi: “Isagu waxa uu ii soo diray fariin qoraal ah, wuxuuna ii rajeeyay nasiib wanaagsan. Waxa uu ii sheegay in Bayern ay tahay koox wayn, isla markaana uu Bundesliga ku faraxsanaan doono in aan anigu halkaas tago”.
“Isagu waa tababare fiican, waa mid ka mid ah tababarayaasha aduunka ugu fiican. Waa hogaamiye dhab ah, wax badan ayaan isaga ka bartay, gaar ahaan heerka maskaxda isla markaana sharaf ayay ii ahayd in aan isaga la soo shaqeeyay” ayuu Coutinho ku amaanay Klopp.
Sidoo kale Coutinho waxa uu talo ka helay saaxiibkiisa xulka Brazil ee Roberto Firmino oo ay sidoo kale Liverpool ku soo wada ciyaareen maadaama oo uu Firmino khibrad u leeyahay horyaalka Bundesliga.
Coutinho oo ka hadlaya wixii uu Firmino kala sheekaystay ayaa yidhi: “Wax walba waxaa ka badan in aanu ka sheekaysanay xooganaanta Bundesliga iyo sida ay ciyaaruhu iskugu dhaw yihiin”.
Coutinho oo ka hadlaya horyaalka Bundesliga ayaa yidhi: “Intii lagu guda jiray labadii kulan ee ay Bayern la joogay, xoganaan badan ayaa halkaas ka jirtay, ee min bilawga dhinaca garoonka ilaa dhinaca kale sida England, waana in ka badan Spain iyo Brazil, taasina aniga way ii fiican tahay”.